Sign up for Public Alerts - Somali | Multnomah County
PublicAlerts waa nidaam dadka loogu digo markay tahay inay tallaabo qaadaan si ay u badbaadaan, sida inay joogaan guryaha, biyaha baylka ah, ama qaxaan. Wuxuu u diraa farriimo cod, qoraal ah, iyo iimeylo dadka deggan Degamda Multnomah.
Degmooyinka kale way leeyihiin nidaamyo kan oo kale ah, laakiin Degmada Multnomah waxay kaliya kaga duwan tahay inay digniinaha ku bixiso 10 luuqadood. Luuqadahan waa: Ingiriisi, Carabi, Shiine, Jabbaaniis, Laoshiyaan, Roomaaniyaan, Ruush, Soomaali, Isbaanish, Yukreeniyaan ama Fiitnaamiis.
Hase yeeshee, foomka diiwaangalintu wuxuu hadda ku qoran yahay Ingiriisi oo kaliya. Si aad u hesho Public Alerts, isoo raac: Booqo www.publicalerts.org. Oo ah P-U-B-L-I-C-A-L-E-R-T-S-dot-ORG. Hoos u jeed ilaa aad aragto batanka "Sign up". Halkan dhagsii.
Waxaanu ku tusin sida la isku diiwaangaliyo haddii aad ku nooshahay ama ka shaqayso Portland, Gresham, Woodvillage, Troutdale, Fairview, Corbett, Sauvie Island, ama meel kale oo ku taal Degmada Multnomah.
Markaa dhagsii linkiga koowaad.
Shaashaddan iyo shaashaddaha soo socdaa waxay kuu saamaxayaan inaad luuqad ka doorato liiska hoos-u-baxa ee dhinaca midig sare ee shaashadda. Waxaanu ognahay in tarjumaadahan iswadaa ayna sax u ahayn si dhammaystiran. Laakiin waa kan ugu fiican ee aanu hadda awoodno.
Boggan, dhagsii linkiga buluugga wayn ah "Sign Up Here”
Waxaan samaystay summad (yuusarname). Waa inuu ugu yaraan 4 xaraf ka kooban yahay. Waxaan rabaa inay kayga samaysto Farahali. Ogow calaamadda yar ee cas ee ku xigta meelaha bannaan. Taasi waxay ka dhigan tahay waa inaan buuxiyaa meelahan bannaan kahor intaanad sii wadin.
Waxaan ku qoray magacayga koowaad halkan. Magacayga dambena halkan.
Kadib waxaan u baahanahay kelmadda sirta ah. Waa inuu ugu yaraan yahay 8 sifo oo ugu yaraan hal xaraf yahay midna tiro yahay.
Kadibna waxaan ku celiyey mar labaad baasweedhka.
Marka xiga waxaan dooran mid kamid ah kuwan su'aal dhawriseed aan ka jawaabo:
Waa maxay magaca asalka ah ee ayeeydaa?
waa maxay magaalada hooyadaa iyo aabahaa ku kulmeen?
waa maxay magaca saaxiibkaagii ugu fiicnaa carruurnimada?
waa maxay magaalada aad kula kullantay lammaanahaaga?
shaqadaadii u horraysay halkee ayey ahayd?
Waa maxay dugsiga aad dhigan jirtay fasalkaagii lixaad?
waa maxay naasnaystaadii carruurnimo?
Waa maxay jidka aad ku noolayd fasalkii saddexaad?
muxuu ahaa magaca rabbaayadda dookhaaga ah ama xayawaanka macmalka ah ee jilicsan?
muxuu ahaa magaca macallinka dookhaaga ah?
waa maxay magaalada aad ku dhalatay?
Marka aad doorato su'aashaada, jawaabta halkan ku qor. Hubi inuu yahay wax aad xasuusan doonto. Ugu dambayn, waa inaad yeelato akown iimeyl. Haddii aanad yeelan, waxaad waydiisan kartaa xubin qoyska ka tirsan inaad isticmaasho kiisa.
Marka aad dhammayso boggan, sax saar sanduuqa, "I accept terms of service" oo dhagsii “create your account.”
Shaashaddan, waxaad noo sheegi doontaa sida aad rabto inaad u hesho digniinaha. Halka ka hoosaysa "Here’s how to contact me" waxaad kaga dari kartaa lambar taleefanka gacanta si aad u hesho farriimaha qoraalka ah. Waxaad ku dari kartaa taleefanka gacanta si aad u hesho farriimaha codka ah, lambarka taleefanak ganacsiga.
Kadib dhagsii “save and continue.”
Halkan waxaad go'aansan goobta ama goobaha laga yaabo inaad rabto inaad ka hesho digniinaha. Waxaad ku dari kartaa gurigaaga, dugsiga carruurtaada, cinwaanka shaqadaada. Waxaan ku dari doonaa shaqadayda. Wuxuu xaqiijin cinwaankaaga. Haa, waa sidaas. Marka aad ku darto dhammaan meelaha aad rabto, dhagsii, "Save and Continue.”
Hadda dooro luuqadda aad rabtid inaad ku hesho digniinaha Waxaan ku rabaa digniinahayga Ingiriisi.
Sidoo kale waxaad dooran kartaa inaad noo sheegto baahi naafonimo ama caafimaad. Ma waxaad tahay: sariir-yaal, dhagoole ama mid maqal culus? Dhib ma ku qabtaa xidhiidhka, ama xasuusta? Ma waxaad tahay ku-tiirsane qalab koronto ku shaqeeya. Miyaad: isticmaashaa tukube ama ul-curyaan, ama kursi-curyaan, leedahay naafo xagga koboca ah, la kulantaa dhibaatooyin xagga caafimaadka maskaxda ah, isticmaashaa ogsijiin? Ma awooddaa inaad hadasho ama ma waxaad tahay qof arag ahaan dhantaalan?
Wadaagista macluumaadkaaga caafimaad khasab maaha mana dammaanad qaadayso kaalmo, laakiin waxay caawin kartaa gurmadka koowaad inay ogaadaan adeegyada laga yaabo inaad u baahan tahay xaaladda gurmadka.
Waxa laga yaabaa inaad bixiso cid lala xidhiidho xaaladda gurmadka iyo lambarka taleefanka qof aad ku kalsoon tahay, laga yaabaa xubin qoyskaaga ka tirsan ama saaxiib dhaw, kaasi oo laga yaabo inuu awoodo inuu ku taageero xilliga xaaladda gurmadka. Waxa sidoo kale laga yaabaa inaad ku darto taariikhda dhalasho, haddii aad doonto.
Waxaan ku dhaafi kuwaas bannaani hadda.
Ugu dambayn, dib-u-eeg macluumaadka si aad u hubiso inuu dhammaantii sax yahay. Haddii aad rabto inaad wax ka beddesho, dhagsii batanka "edit". Kadib dhagsii "Finish."
Intaas ayeyna ku dhan tahay! Waad ku mahadsan tahay is-diiwaangalinta Public Alerts!